Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal बालबालिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि देखिने एमआईएस-सी कस्तो रोग हो ? | Aafno Khabar
बालबालिकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि देखिने एमआईएस-सी कस्तो रोग हो ?
२०७८ भाद्र २२ गते १५:४१ प्रकाशित
एजेन्सी । नेपालका विभिन्न अस्पतालहरूमा मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन एमआईएस-सी भएर अस्पताल ल्याइने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्न थालेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
कोभिडपश्चात् बालबालिकामा देखिने गम्भीर स्वास्थ्य समस्या एमआईएस-सीका कारण उपचारका क्रममा केहीको ज्यान समेत गइसकेको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका भनाइमा कोभिडबाट बालबालिकालाई बचाउन उपयुक्त ध्यान नपुग्दा यो समस्या देखा पर्न थालेको हो।
एमआईएस–सीको उपचार तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने र अस्पताल ल्याउन ढिलो भएमा अवस्था जटिल बन्ने भएकाले समयमै सचेत बन्न चिकित्सकहरूले अभिभावकलाई सुझाव दिएका छन्।
एमआईएस–सी कहिले हुन्छ ?
कोभिड नभएका बालबालिकामा एमआईएस–सी नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोनाभाइरस परीक्षणबाट कोभिड पुष्टि नभएका बालबालिकामा पनि यो समस्या देखियो भने उसलाई कोभिड थियो कि थिएन भनेर पहिले पुष्टि गर्ने गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ।
शरीरको विभिन्न अङ्गमा असर देखा परेर आउने बच्चाहरूको कोरोनाभाइरससँग कुनै न कुनै सम्बन्ध देखिएको छ । कुनै बेलामा उसलाई भएको वा परिवारका सदस्यलाई भएको हुनसक्छ। त्यसको लिङ्क स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामी एमआईएस–सी भएको भनेर भन्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
कोभिड भएको दुईदेखि चार साताभित्र एमआईएस–सी देखिने डाक्टरहरुको भनाई छ ।
कोभिड एमआईएस–सी भएका बालबालिकाका शरीरका विभिन्न प्रणाली र अङ्गहरूमा एकै पटक असर गर्ने हुँदा विभिन्न खाले लक्षणहरू देखा पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
बालबालिकामा प्रायः उच्च ज्वरो आउने गरेको पाइएको छ । यसमा ज्वरो एकदमै हाई ग्रेडको अर्थात् धेरै तापक्रमको देखिन्छ र दुईदेखि चार दिनसम्म पनि धेरै ज्वरो आउने हुन्छ।
त्यसबाहेक पेट दुख्ने, पखाला र बान्ता हुने एवम् शरीरमा डाबर देखिने पनि हुने गरेको बताइएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने डाबरहरू आउँदा चिलाउँदैन र त्यो अनुहारभन्दा पनि जीउमा र हातगोडामा देखिन्छ। कसैकसैमा ओठ सुन्निने र जिब्रो सुन्निने पनि पाइएको छ।
एमआईएस–सीले गाल्यो र साह्रो भयो भने सास फेर्न गाह्रो हुने र बच्चाहरूले पिसाब कम फेर्ने जस्ता समस्या पनि देखिने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरससँग लड्नका लागि बालबालिकाको शरीरले गर्ने प्रतिक्रियाका कारण एमआईएस–सी हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। भाइरस वा कीटाणुभन्दा पनि त्यसप्रतिको प्रतिक्रियाले एमआईएस–सी हुने गरेको डाक्टर बताउँछन्।
औषधोपचार कति सहज र सुलभ ?
एमआईएस–सीका बिरामीको अवस्था पनि कोभिडका बिरामीको अवस्थाजस्तै फरक–फरक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा कोभिडका बिरामी सामान्य, मध्यम र गम्भीर खालका भएजस्तै एमआईएस–सीका बिरामी पनि सामान्य, मध्यम र गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। र, बिरामीको अवस्था हेरेर त्यसैअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्य बिरामीका हकमा उपचार खासै खर्चिलो नभए पनि गम्भीर बिरामीका लागि उपचार निकै खर्चिलो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नेपाल पेडियाट्रीक सोसाइटीमा सदस्य डा. अग्रवाल भन्छन्, हामीले विभिन्न निर्देशिका अनुसार उपचार गर्ने हो। नेपाल पेडियाट्रीक सोसाइटीले पनि निर्देशिका बनाएको छ, त्यसैको अधीनमा रहेर हामीले उपचार गर्ने हो। उपचार गर्दा हामीले इन्ट्रभिनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईभीआईजी) भन्ने औषधि दिन्छौँ। यो चाहिँ अलि महँगै पर्न जान्छ।